Shirkii qiimeynta goblda oo ka furmey Jigjiga
shir lagu qiimanayo warbixinta waxqabadka 9 bilood ee la soo dhaafay ee gobolada deegaanka ayaa ka furmay hoolka shirarka kaali ee xarunta madaxtooyada deegaanka ee magaalada jigjiga waxaana furey madaxweyne ku xigeenka deegaanka Mudane Aadan faarax. Shirkan oo uu hogaaminayey madaxweyne ku xigeenka deegaanka isla markaana uu ku wehelinayey madaxa xarunta dhexe ee xisbiga demoqraadiga […]
Sida aan la wada socono waxaa maalintii shalay bilaabantay bisha barakaysan ee Ramadaan. Bishan oo ah bil shacabka islaamka ay sugaan sannadka oo idil ayaa waxaa ummada islaamka ay ugu talagashaa cibaado, istiqfaaro iyo camal suuban. Inkastoo magaalada Jigjiga oo ah caasimada Degaanka Soomaalida ay tahay magaalo muslin hadana waxaa aad looga saluugaa inayna u […]
Akhriso:-Dowlad deegaanka Soomaalida oo dib ulasoo noqoday dhul ay xukuumadii hore kuwareejisay deegaanka canfarta
War saxaafadeed ay soo saartay xukuumada deegaanka soomalida ayay ku sheegtay in dib ay ulasoo noqotay dhul ay xukuumadii hore kuwareejisay deegaanka canfarta sadexda degmado oo in dhawaale ay kasocdeen mudaharad dhimasho badan dhaliyay ayay xukuumadu ugu baaqday in dhulkaas maamulka canfartu iskaga guuraan uuna yahay dhul soomaaliyeed go aan kaan geesinimada leh ayaa xukuumada […]
Madaxwaynaha dawlada deegaanka Somaalida mudane Mustafe Cagjar ayaa magacaabay Taliye kuxigeenka ciidamada Gaarka ah ee Liyuu Police-ka deegaanka Somaalida. Xilkani ayaa loo magacaabay Kornayl Zakariye oo kamid ahaa saraakiisha dhexe ee ciidanka Liyuu Police-ka kaasi oo aan lagu baranin xiliyadii dhibaatada iyo xasuuqa ba’an ciidamada Liyuugu dadkooda kuhayeen. Magacaabista Kornayl Zakariye oo kasoo Jeeda Gobolka […]
Dabley hubeysan oo 11 ruux Soomaali ku dilay deegaanka Soomaalida
Wararka ka imaanaya Gobolka Siti ee dowlad deegaanka Soomaalida ee dalka Itoobiya ayaa sheegaya in 11 ruux oo shacab ah la dilay, halka tiro kalena la dhaawacay, kaddib markii kooxo hubeysan ay rasaas ku fureen dadkaas. Wasiirka Warfaafinta dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya C/llaahi Maxamed Mowliid ayaa sheegay in dilkan ay geysteen dhalinyaro hubeysan oo ka […]
Madaxweyne Mustafe oo gaadhay magaalada Adaama.
Madaxwaynaha dowlada deegaanka Soomaalida mudane Mustafe Muxumed Cumar iyo waftigii uu hogaaminayay ayaa gaadhay caasimada deegaanka Oromiya ee magaalada Adaama halkaas oo si weyn ay ugu soo dhaweeyeen masuuliyiinta sare ee deegaanka Oromoda uu hor kacaayey madaxwaynaha deegaanka Oromiya mudane Shimallis Abdiisaa,waxana waftiga madaxwaynaha lagaga hor yimid duleedka magaalada Adaama dabadeena waxaa loo soo galbiyay […]
RW Dr Abiy axmed ayaa kulan laqaatay Agaasimaha guud ee IMF.
RW Dr Abiy axmed ayaa kulan laqaatay Agaasimaha guud ee IMF. R/wasaaraha JDFI Dr Abiy Axmed ayaa kulan wada xaajood ah laqaatay agaasimaha guud ee hay’ada lacagta aduunka ee IMF marwo critin lagard. Kulankan ayey Raysalwasaaraha iyo agaasimaha ku garab qaateen,shirwaynaha dalada Belt & Road ee dalka shiinaha kasocda. Maareeyaha xafiiska xoghaynta saxaafada ee raysal […]
DAAWO MUUQAAL:-Xafiska arrimaha hawenka iyo carurta e degmada shinile Oo shir muhiim ah soo agaasimay
DAAWO MUUQAAL:-Booliska DDS oo gacanta ku soo dhigay gaadhi horay loo dhacay
DAAWO MUUQAAL:-Magaalda dhagaxbuur Oo Lagu Qabtay shirkii hay’adaha cadaalada gobolka jarar